“देउवालाई हराउन सक्छु” : शशांक कोइराला – Namaste Dainik
“देउवालाई हराउन सक्छु” : शशांक कोइराला
August 24, 2020 August 24, 2020 NamastedainikLeaveaComment on “देउवालाई हराउन सक्छु” : शशांक कोइराला
८ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा आफूले शेरबहादुर देउवालाई पराजित गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार भए मात्रै देउवा पराजित हुने उनको भनाइ छ । पार्टी सभापतिका लागि अरु नेताहरुको दावी रहे पनि देउवालाई पराजित गर्ने ग्यारेण्टीका साथ आफ्नो दाबी सभापतिमा रहेको उनले बताए । न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महामन्त्री कोइरालाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि सभापतिमा देउवालाई पराजित गर्न नसक्ने बताए ।
यद्यपि सभापतिको उम्मेदवार बन्न संस्थापन इतरको समूहमा धेरै नेताहरुको दाबी रहेको स्वीकार गरे । रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहको नाम लिएका उनले सबै मिलेर एक जना उम्मेदवार बन्नुपर्ने बताए । ‘व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने शेरबहादुरजीलाई हराउने कोही व्यक्ति छ भने त्यो म नै हुँ । रामचन्द्र दाइले पनि सक्नुहुन्न । अरुले पनि सक्दैन’ उनले भने, ‘ग्यारेण्टीका साथ भन्छु शेरबहादुरजीलाई हराउने व्यक्ति म बाहेक अरु छैन ।’
उनले पार्टीमा मनोमानी गरेको भन्दै देउवाको आलोचना गरे । महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा भोटका लागि विभाग गठन गरेको र विधान विपरित भयो भनेर आफूहरुले विरोध गर्दा नसुनेको भन्दै उनले महाधिवेशनबाट यसको जवफ दिनुपर्ने बताए । कोइरालाले भने, ‘उहाँले मनोमानी गर्नुभयो । हाम्रो विरोध पनि सुन्नु भएन । महाधिवेशन आउँछ त्यसमा निर्णय गर्नुपर्‍यो । किनकी अरु विकल्प छैन ।’
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई सम्मानजनक व्यवहार गरौं : मानव अधिकार आयोग
< Breaking > नेपालमा आज थप ७४३ जनामा कोरोना पुष्टि साथै ८ जनाको कोरोना बाट ज्यान गयो
नरेन्द्र मोदि द्वारा छिट्टै नै भारतमा बनेको कोरोना खोप उपलब्ध गराउने दाबी !
August 15, 2020 August 15, 2020 Namastedainik
बर्षा राउत लाइ माफी दिने कि नदिने,भन्छिन कालापानीमा गएर झुण्डि’न तयार छु,आफ्नो मत राख्नुहोला(भिडयो सहित)
भारतमा तिब्र गतिमा कोरोना, एकै दिन गयो २६ को ज्यान, मृत्यु हुनेको संख्या ४४८ पुग्यो ।